Sina: Ny fivoaran’ny demokrasia hatramin’ny 1989 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2009 18:43 GMT
Nandritra ny faran’ny herinandron’ny Fetin’ny Reny farany teo tamin’ny 10 Mey, nisy avara-pianarana maromaro tao Beijing nanomana seminera hiresahana ny faha-20 taonan’ny hetsika ho an’ny demokrasia tany Sina. Hetsika manan-danja tokoa io mba handrodanana ny fahanginan’ireo avara-pianarana momba ny hetsiky ny mpianatra tamin’ny 4 Jona, ary mba hanoherana ny fijery ofisialy an’ilay hetsika ho toy ny ‘korontana’.
Nandritra ny andro vitsivitsy farany teo, navoaka tamin’ny aterineto tao amin’ny China in Perspective ireo teny nolazaina nandritra ny fivoriana. Misy lahatsoratra tsy voasonia ao amin’ny ‘China in Perspective’ manome amin'ny antsipiriany ny tatitry ny resaka natao tao amin’ilay seminera.
Nisy teo amin’ny 19 teo ny nandray anjara tamin’izany seminera izany, anisan’izany : Xu Youyu (徐友渔), Mo Zhixu (莫之许)、Cui Weiping (崔卫平), Hao Jian (郝建), Xu Xiao (徐晓), Zhou Duo (周舵), Liang Xiaoyan (梁晓燕), Qin Hui (秦晖), Guo Yuhua (郭于华), Li Hai (李海), Liu Zili (刘自立), Qian Liqun (钱理群), Teng Biao (滕彪), Tian Xiaoqing (田晓青), Wang Junxiu (王俊秀), Xu Yinong (许医农), 、Yan Yusheng (殷玉生), Zhang Boshu (张博树) ary Zhang Yaojie (张耀杰). Nanomboka tamina fahanginana 3 minitra ny seminera mba hanehoan’ireo mpandray anjara ny fanajany ireo reny Tiananmen sy ireo niharan-doza tamin’ilay hetsiky ny 4 Jona.
Nanokatra ny adihevitra i Qian Liqun tamin’ny fanazavana ny lohahevitr’ilay fihaonana:
Voalohany indrindra aloha, antso avy amin’ny fahatsapan-tenan’ny mpampianatra ity. 20 taona lasa izay, mpianatra maro no namoy ny ainy ho an’ny demokrasia taty Sina. Amin’ny maha mpanabe azy ireo antsika, tsy afaka niaro azy ireo isika ary niaina tao anatin’izany heloka izany. Fomban’i Beida (Anjerimanontolon’i Pekin) ny miaro ireo mpianany ary 90 aona lasa izay, nandritra ny hetsiky ny 4 Mey, isaky ny misy mpianatra voasambotry ny manam-pahefana dia nitsangana foana ny rektoran'ny Anjerimanontolo Cai Yuanpei mba hiaro azy ireo. Mankasitraka ireo mpianatra nanao sorona ny ainy izahay ary ho an’ireo taona maro nijalian’izy ireo tao anatin’ny tsy fahamarinana tamin’ny tantaran’izany hetsika izany. Raha tsy miteny androany izahay dia tsy mendrika ny ho antsoina hoe mpanabe azy ireo. Faharoa manarakaraka an’izay, antso ho amin'ny rariny avy amin’ny fahatsiarovan-tenan’ireo avara-pianarana ity. Na dia miezaka ny manamarina ny hetsiky ny 4 Jona aza ireo mpanao politika, tokony hiady ireo avara-pianarana mba ho voasoratra ao anatin’ny tantara ny marina momba ireny hetiska ireny ho an’ny fikarohana sy fifanakalozan-kevitra akademika.
Nampiseho taratasy iray i Qian, ’iraka ara-tantara tsy feno’, nandritra ny seminera nanaovana jery todika ny fivoaran'ny demokrasia nanomboka tamin’ny taona 1940 tamin’ny nihantsian'ny antoko kaominista ny làlana jadon'ny KMT. Na izany aza, taoriana kelin’ny nahazoan’ny CCP ny fitondràna dia namadika ny fampanantenana lalampanorenana hanomezana fahalalahana hiteny, haneho hevitra sy hivory, sns ho an’ny vahoaka izy ireo. Ny famoretana ireo sampana tsy mpankasitraka ny revolisiona sy mpanohitra ny hery ankavanana tany afovoan'ny taona 1950 no tena nametraka ny fahefan'ny CCP tamin'ireo fanapariaham-baovao famoahana rehetra. Nisy tsioka-na hetsika demokratika vaovao indray naka toerana tamin’ny tapaky ny taona 1970 niaraka tamin’ny fipoiran’ny famoahana lahatsoratra an-tsokosoko avy amin'ny vahoaka. Noporetin’i Deng Xiaoping indray izany hetsika izany tamin’ny taona 1981. Taorianan’ny nandinihana ireo ‘brochures’ sy ireo famoahan-dahatsoratra tamin’ny 1989, niteny i Qian fa ny hetsiky ny mpianatra tao Tiananmen dia lova avy amin’ny hetsika ho amin'ny demokrasia tany Sina izay mampahalala sy manome aina ny fitadiavana fiovana politika ho avy:
Tokony hisy marimaritra iraisana eo amin’ny fitondran’ny Governemanta sy ny hetahetan’ny mponina amin’ny fanavaozana any Sina. Ny rafitra politika dia tokony hampirisika ny fandraisan’ny vahoaka anjara, mifototra amin’ny lanjan’ny demokrasia, anisan’izany ny fahafahana dimy voasoratra ao anatin’ny lalam-panorenantsika. Ny fanavaozana rehetra izay ny antoko sy ny fitondrana no tena mibahan-toerana ao dia tsy mijery afa-tsy ny tombontsoan'antoko tokana ary hiteraka olana ara-politika, ara-toe-karena, ara-sosialy ary ara-moraly. Io no fampianarana manan-danja be indrindra afaka tsoahina avy amin’ny hetsika ho an’ny demokrasia tamin’ny 1989 ary ny lesona lehibe indrindra azontsika tamin’ny famoretana.
I Zhou Duo dia nanolotra ny heviny manokana momba ny zava-nitranga nanomboka tamin’ny tapaky ny volana Aprily ka hatramin’ny 4 Jona 1989. Zhou dia mpanao gazety mpanadihady izay nanampy ireo mpiasa amin’ny haino aman-jery hihetsika hanosika ny hetsiky ny mpianatra ary niezaka ny nandresy lahatra ny mpianatra izy handao an’i Tiananmen alohan’ny nahatongavan’ny PLA teo amin’ilay tany malalaka.
Niteny i Cui Waiping fa nanakivy ny fiaraha-monina ny fahanginana faobe tamin’ny zava-nitranga ny 4 Jona ary fotoanany izao hampitsaharana izany fahanginana izany:
Amin’ny tsingerintaona faha-20’ny fahatsiarovana ny 4 Jona, tiako ny hampahafantatra ity taratasy ity ary hametraka ireto fanontaniana ireto amin’ny namako rehetra: Inona no voka-dratsy teo amin’ny fiaraha-monina nateraky ny fahanginantsika nandritra izay 20 taona farany izay? Inona no fahasimbana nateraky ny fahanginana toy izany teo amin’ny fanahintsika sy ny ara-moralin'ny firenentsika? Toy ny inona ny fiatraikan’izany teo amin’ny asantsika sy ny fiainantsika? Mbola afaka mitazona izany fahanginana izany ve isika?
Manapoizina ny tontolo iainantsika sy ny rivotra iainantsika izany tsiambaratelo izany ary miatraika any amin’ny fiainantsika sy ny fanahintsika. Rehefa mifidy ny handrindra ny tsikerantsika isika mba hisorohana ny olana dia mifidy ny hanafina ny marina, milahatra amin’ny governemanta ary mandray anjara amin’ny kilalaom-pahefany. Na dia tsy tena isika mivantana aza no fototry ny filatsahan-drà 20 taona lasa izay, ny fahanginantsika nandritra izay taona maro izay, na inona na inona antony, dia mahatonga antsika ho mpiray tsikombakomba tamin’ny zava-nitranga
Niteny ireo mpanolotra sasany toa an-dry Xu Yaoyu sy Yan Yusheng fa ny zava-nitranga ny 4 Jona dia mampametra-panontaniana momba ny maha-ara-drariny sy ny ethique [ethical grounds] ijoroan'ny filazan’ny fitondrana. Lasa rindrim-piarovana tombontsoa izay tsy maintsy resahan’ny aty amin'ny fototra matetika amin’ny endrika olana itambaram-be ny Antoko-Fitondrana.
I Xu Yaoyu dia manazava ny namotehan’ny raharahan’ny 4 Jona ny fanantenan’ny vahoaka tamin’ny CCP sy ny manam-pahefana .
Efa nampoizin'ny vahoaka ny herisetra, nefa tsy novinavinain’izy ireo ny vonomoka! Nitsikera sy nanohitra ny governemanta foana ny vahoaka nefa tsy mbola nandray azy ho fahavalo mihitsy. Afaka mampiasa sarintsarim-pianakaviana isika mba hanoritsoritana ny fifandraisana. Nojeren’ny vahoaka ho toy ny raiamandreny mpanao bontiolo ny mpitondra nanjakazaka sy nanao didy jadona, nefa tsy noeritreretin-dry zareo mihitsy fa hamono ny zanany izy ireo. Rehefa nirodana ilay sarisarina fianakaviana ary nandray ny vahoaka ho fahavalo ny governemanta, dia mba nanao toy izany koa ny vahoaka
I Zhang Boshu dia nitsikera ny lojikam-pifanoherana sy ny ‘paranoia’-n’ny mpanararao-pahefana ary ny ‘oligarchie’-ny fitondrana izay mandray ny tsikera ho fihokoana sy fampitahorana. Amin’ny lafiny iray hafa, niteny i Hao Jian fa diso nampakarin'ny mponina sy noventiventesiny loatra ny endrika tsy misy fotony ananan’ny mpanararao-pahefana.
Nasongadin'i Zhang Boshu ny fiombonany hevitra, amin'ny filazana fa:
Endrika isehoan’ny kolotsaina pôlitika manao didy jadona rehetra ny ‘Antagonistic rationality’. Ny famoretan’ny CCP ny hetsika fitiavan-tanindrazana tamin’ny 1989 dia vokatry ny ‘antagonistic rationality’. Raisiny ho fiokoana ny tsikera rehetra manohitra ny fahefana ary mandray ireo tsikera, fanontaniana ary fandikàna izay rehetra ataon’ny fitondràna ho fandàvana ny fahefana sy fitorohana mifono hevi-dratsy. Fiandohan’ny ratsy rehetra eo amin’ny tantarantsika izany fomba fisainana ananan’i Deng Xiaoping sy ireo mpitarika ny CCP hafa izany.
Nanamarika i Xu fa taorian’ny 4 Jona, nitodika tamin’ny lalampanorenana ho an’ny hetsika fiarovana ny zon’olombelona ny vahoaka. Mba hanovàna tsikelikely ny rafitra politika, nanasongadina ny tokony hanajàna ny fitazonana ny soatoavina iraisam-pirenena sy ny fomba ara-pilaminana i Xu.
Nanasongadina i Wang Junxui sy Tieng Biao fa nanomboka tamin’ny 2003 dia nanokatra làlam-baovao tamin’ny hetsiky ny demokrasia ny hetsika fitakiana zon’olombelona ary Liang Xiaoyin koa dia nahita ny fipoiran’ny kolotsainan’ny asa an-tsitrapo nandritra ireo taona farany ireo tahaka ny fivoaran’ny fahatsiarovan-tena sosialy. Niteny i Mo Zhixu fa nahomby ny Aterineto tamin’ny fanoherana ny fitazànam-potsiny faobe ary nino izy fa maro ny olona no hanatona ny hetsika ho an’ny fahafahana sy ny demokrasia.